Shirwaynaha Wada tashiga Shacabka,Dfi iyo Xukuumada DDSI ee qorshaha Isbedelka koboca dhaqaalaha iyo isbadalka 2aad ee GTP2ga oo galay maalintii 4aad iyo Doorka Aqoonyahanka. - Cakaara News
Shirwaynaha Wada tashiga Shacabka,Dfi iyo Xukuumada DDSI ee qorshaha Isbedelka koboca dhaqaalaha iyo isbadalka 2aad ee GTP2ga oo galay maalintii 4aad iyo Doorka Aqoonyahanka.
Jigjiga(CN) Khamiis July-24-2015.Waxaa, maalinti 4aad galay kulan waynihii wada tashiga, shacabka xukuumada DDSI, ee lagu gorfaynayay jihooyinka iyo istaraatajiyadaha ee qorshaha Isbedelka koboca dhaqaalaha ee isbadalka Wajiga 2aad ee qorshaha GTP2ga.
Waxaana, hoolka shirarka ee xafiiska haweenka saaka ka furmay wajigii 3aad ee la kulanka aqoonyahanka DDSI si ay doorkooda uga qaataan tashiga iyo afkaaraha,kulankaasi ayaa waxaa hogaaminayay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, afhayeenka golaha baarlamaanka DDSI mudane maxamed rashiid isaaq, iyo wasiirka wasaarada arimaha fereraalka JDFI Dr sheferew tegle mariam.
Madaxwaynaha DDSI mudane cabdi maxamuud Cumar, ayaa sharax dheerka bixiyay, bar bilowgii qorshihii GTP1ka ee shantii sano ee aan soo dhaafnay, xiligaasi oo ay deegaanka ka jirtay dib u dhac wayn oo dhinacyada nabadgalyada, horumarka iyo maamulka suuban, waxayna taasi waxay arqalad ku noqoday shacabka deegaanku in ay helaan adeegyadii aas asiga ahaa.
Wuxuuna madaxwaynuhu sheegay in bilowgii qorshahaasi GTP1ka xukuumada DDSI qaatay talaabooyin lagu hirgalinayo qorshaasi iyada oo sidii loogu talagalay loogu guulaystay, korna loo qaaday guud ahaanka koboca dhaqaalah, si buuxdana loo xasiliyay amniga deegaanka, Wasiirka wasaarada arimaha fadaraalka ee JDFI Dr sheferew tegle mariam ayaa ayaa aqoon yahan ka deegaanka ugu mahad celiyay sida muga leh ee ay uga qayb qaateen hirgalinta qorshihii GTP1ka. Wuxuuna, si qoto dheer uga waramay guulaha waawayn ee uu guud ahaan balkeena itoobiya ka soo hooyay qorshihii GTP1ka, wuxuuna sheegay in shantii sano si wayn loo dhimay lana qalajiyay saboolnimada korna loo qaaday koboca dhaqaalaha, lana xaqiijiyay damaanad qaadka cuntada, korna loo qaaday adeegyada aas aasiga ah bulshada sida caafimaadka, helitaanka biyaha, waxbarashada wax soo saarka beeraha, bar bilow fiicana laga muujiyay dhinaca warshadaha.
Afhayeenka golaha baarlamaanka DDSI ahna gudoomiyaha XDSHSI mudane maxamed rashiid isaaq, ayaa sheegay in iyada oo laga duulayo qorshihii GTP1ka khibradna laga qaadanayo nidaamkii loo hirgaliyay iyo meelihii ay ka jirtay goldalooladu, si buuxda loo hirgalin doona qorshaha GTP2ga.
Aqoon yahanada DDSI ayaa dhan’kooda soo bandhigay habkii fulineed ee loogu guulaystay hirgalinta qorshahaasi tilmaana ka bixiyay habka loogu diyaar garoobaya qorshahan GTP2ga. Kulan waynahan ayaa sii socondoona ilaa maalinta barito.